दिमागलाई तन्दुरुस्त राख्नकाे लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने बानीहरु — Imandarmedia.com
दिमागलाई तन्दुरुस्त राख्नकाे लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने बानीहरु
काठमान्डाै । बानी व्यवहार र जीवनशैलीले मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हरेक दिन गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरु जस्तै दैनिक खाने खाना, व्यायाम, निन्द्रा आदिले प्रत्यक्ष रुपमा दिमागमा असर पारिरहेका हुन्छन् । अस्वस्थ्यकर बानीव्यवहारले अल्जाइमर, पार्किङ्सन्स जस्ता खतरनाक रोगहरु लाग्न सक्छन् । त्यसैले जीवनशैली र दैनिक जीवनयापनमा गर्ने विभिन्न क्रियाकलापमा परिवर्तन नगरि मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न सकिदैन ।त्यसैले केही यस्ता बानीहरु छन् जसलाई समयमै परिवर्तन गरेन भने तपाईंको मस्तिष्कमा ठूलो असर पुग्न सक्छ ।
पैदल हिँड्ने स: जामा नेटवर्कले गरेको एक अनुसन्धानले ३० वर्ष कटेका मानिसहरुलाई दैनिक दश हजार पाइला हिँड्नुपर्ने देखाएको छ । जसले मस्तिष्कका कोशिकाहरु र रक्त नलीहरुको विकासमा सहयोग गर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ ।
सागपात: ल्यूटिन, करम र पालकको सागले मस्तिष्कलाई तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । यी सागहरुमा हुने पोषक तत्वले मस्तिष्कमा हुने खैरो पदार्थलाई सक्रिय गराउँछ । जसले स्मरणशक्ति बढाउँछ ।
रक्तचाप : रक्तचाप सधैँ सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । उच्च रक्तचापले हृदयघात मात्रै होइन ‘ब्रेन स्ट्रोक’ पनि गराउँछ । त्यसैले रक्तचापको नियमित रुपमा चेकजाँच गर्ने र सधैँ सन्तुलनमा राख्ने गर्नुपर्छ ।
निन्द्रा : निन्द्रा स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले मस्तिष्कलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि दिनमा ७ घण्टा निदाउनु जरुरी छ । भरपुर निन्द्राले मानिसलाई फेरि सक्रिय गराउँछ र स्मरण शक्ति बढाउँछ । यसले मस्तिष्कमा हुने विभिन्न प्रक्रियालाई समेत सक्रिय बनाइराख्छ । निन्द्रा पुरा नभएमा भिटा–एमिलाइडको निर्माण हुन्छ र अल्जाइमर जस्ता रोगको शिकार भइन्छ ।
जङ्क फुड: यस्ता खाद्यपदार्थ खानबाट सधैँ बच्नुपर्छ । अस्वस्थकर खानेकुराको बानी लाग्यो भने यसले मस्तिष्कको कोशिकाहरुलाई नष्ट गराइदिन्छ । जङ्क फुडले मस्तिष्कमा ग्लियान कोशिकाहरुलाई सक्रिय गराउँछ । जसले दिमागका विभिन्न भागमा थोरै थोरै सुन्निने समस्या पैदा गर्न थाल्छ ।
ब्रेकअपपछि एक्लो जीवन कति फाइदाजक ?
मुख गन्हाउने समस्या किन हुन्छ ?
वर्षायाममा सताउने रोग टाइफाइडदेखि झाडापखलासम्म ,यी हुन् !
बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानीले हुनसक्छ हृदयघात !
विवाहपछिको सुखद् सम्बन्धको लागि प्रेमी-प्रेमीकाको बुझ्नु पर्ने बानीहरू यसरि थाहा पाउनुहाेस